Qorshaha Wakhti Ee Ansixinta Golaha Wasiirada Ee Golaha Wakiiladu Dajiyey Waa Mid Qayrul Sharci Ah
W/Q Abdifatah Ahmed
(Hadhwanaagnews) Thursday, January 11, 2018 14:47:57
Wali madaxda Somaliland ma ay fahmin waxa ay tahay saraynta iyo u hogaansanaanta sharcigu. Alle ha u fudaydiyo. Marka qodob sharci ahi uu wax jideeyo, waa in sidiisa loo fuliyo iyaddoon waxna laga dhimin waxna lagu darin!
Qodobka 94aad, farqadiisa 3aad ee dastuurka Somaliland waxa uu leeyahay sidan: " Soddon (30) maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko."
Golaha wakiiladu waa in ay ku ansixiyaan wasiiradda la magacaabay 30 maalmood gudahood oo ka bilaabantay
14 December, 2017 kuna eeg 12 January, 2018. Waxa qayrul-sharci ah in Golaha Wakiiladu uu u qorsheeyay in ansixinta wasiirada la bilaabo 13 January 2018, socotana ilaa 15 January 2018, sida uu sheegay xoghayaha goluhu!!!
Waxa meeshan ku jira 3 cisho oo dib u dhac ah, qarul-dastuuri ah, si loo sababeeyana aan la garanahayn! Waayo loo jabinayaa dastuurka? Mise dastuur-jabinba uma haystaan 3 cisho iyo wax la mid ah? Waxa iyana is-waydiin mudan, mee xafiiskii Garyaqaanka Guud ee arrimahan ka tallin lahaa kana hor-tagi lahaa in ay dhacaan?
Somaliland dawladnimadeedu way laangadhayn uun inta qodob sharci ah jabintiisu ay tahay wax aad u fudud, cidina aanay ka werwarin, cid jabisayna aan lagula xisaabtamahaynin! Golaha Wakiiladu waa in uu arrintaas iyo sababta ay ku dhacdayba uu ka jawaabaa!
W/Q: Abdifatah Ahmed Ileeye
MA Candidate in Governance and Public Policy, Passau University